Izindaba - Ukuhlaziywa Kokukhula Kwe-Fiber Glass Mesh Market Amazwe Aphezulu Idatha, Umkhakha Wemboni, Imali Yezentengiso, Usayizi Wezimakethe ngeSibikezelo Sesifunda kuya ku-2024 ngeSilinganiso Sokukhula Esimangazayo
Ukuhlaziywa Kokukhula Kwe-Fiber Glass Mesh Market ngu-Top countries Data, Industry Trend, Sales Revenue, Market Size by Regional Forecast kuya ku-2024 ngezinga elimangazayo lokukhula
Incazelo emfushane Mayelana Nemakethe ye-Fibre Glass Mesh: I-fiberglass mesh yiphethini elukiwe ngobunono, le-crisscross yentambo ye-fiberglass esetshenziselwa ukudala imikhiqizo emisha enjenge-tape nezihlungi. Uma isetshenziswa njengesihlungi, akuvamile ukuthi umenzi afuthise ingubo ye-PVC ukuze iqinise futhi ihlale isikhathi eside.
Dec 15, 2020 (The Expresswire) - Global “Fiber Glass Mesh Market” 2021-2024 Report Report inikeza ukuhlaziywa okuyisisekelo ngesimo semakethe sabakhiqizi beFibre Glass Mesh ngamaqiniso nezibalo, incazelo, incazelo, ukuhlaziywa kwe-SWOT, imibono yochwepheshe kanye intuthuko yakamuva embulungeni yonke. Umbiko uphinde ubale usayizi wemakethe, ukuThengiswa kweFibre Glass Mesh, Intengo, Imali engenayo, I-Gross Margin kanye ne-Market Share, isakhiwo sezindleko nezinga lokukhula. Lo mbiko ubheka imali engenayo etholakale ekuthengisweni kwalo Mbiko nobuchwepheshe ngezingxenye ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza kanye namathebula wedatha ye-Browse Market kanye namanani asatshalaliswa kumakhasi ayi-117 naku-TOC ejulile ku-Fiber Glass Mesh Market.
I-COVID-19 ingathinta umnotho womhlaba ngezindlela ezintathu eziyinhloko: ngokuthinta ngqo ukukhiqizwa nokufunwa, ngokudala ukuphakelwa kokuthengiselana nokuphazanyiswa kwezimakethe, nangomthelela wayo wezezimali kumafemu nezimakethe zezezimali.
Umbiko Wokugcina uzongeza ukuhlaziywa komthelela we-COVID-19 kule mboni.
UKUQONDA UKUTHI I-COVID-19 IMVULEKO IVALWE KANJANI KULO MBIKO - CELA ISAMPULA
Inhloso yalolu cwaningo ukuchaza osayizi bezimakethe bezigaba ezahlukahlukene namazwe eminyakeni eyedlule nokubikezela amanani eminyakeni emihlanu ezayo. Umbiko wenzelwe ukufaka zombili izici ezifanelekile nezilinganiselayo zomkhakha maqondana nesifunda ngasinye kanye namazwe abambe iqhaza ocwaningweni. Ngaphezu kwalokho, lo mbiko uphinde ubhekele imininingwane eningiliziwe mayelana nezinto ezibucayi ezifana nabashayeli kanye nezinto ezivimbayo ezizocacisa ukukhula kwesikhathi esizayo kwemakethe yeFibre Glass Mesh.
Ububanzi Be-Fibre Glass Mesh Market:
Ngo-2010, i-GlassFibreEurope yayisola ukuthi izinkampani zaseChina iChongqing Polycomp International Corp., iJushi Group neNew Changhai Group zalahla inani elikhulu, elingabizi amanani we-fiberglass rovings, imicu eqoshiwe, izintambo namata emakethe yase-Europe eminyakeni yamuva. Ngasikhathi sinye, i-EU iqala uphenyo lokulahla udoti lwendwangu yengilazi yefayibha evela eChina. Abathumeli abakhulu beFibre Glass Mesh e-Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd, iGrand Composite, iJiangsu Tianyu Fiber Co Ltd babandakanyeka. Lo mcimbi uhlasele kakhulu imboni yaseChina i-fiberglass mesh.
Eminyakeni emihlanu kamuva, Ekubambisaneni okusebenzayo kwe-China Glass Fiber Industry Association, i-China Composites Industry Association, i-Ningbo City Council, ama-Ningbo glass fiber enterprises ameme i-Jiangsu, i-Shandong nezinye izindawo amabhizinisi amakhulu angu-16 eza eNingbo, i-EU glass fiber grid Fabric uphenyo lwamacala olwa nokulahlwa kokulahlwa kodaba ukuze kufinyelelwe esivumelwaneni.
Ngenxa yomkhawulo wokufinyelela embonini ephansi, kunabakhiqizi abaningi eShandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu nakwezinye izindawo zaseChina ezinamandla amakhulu kanye nentengo eshibhile kakhulu. Bakhiqiza ikhwalithi empofu yengilazi ye-fiber fiber, lokhu kuphazamisa ukukhula okunempilo komkhakha, ngemuva kweminyaka embalwa edlule yesikhathi esinzima, futhi imboni e-China izoletha isimo sokuncintisana esihleleke ngokwengeziwe.
Imakethe yomhlaba wonke yeFibre Glass Mesh kulindeleke ukuthi ikhule ku-CAGR ecishe ibe ngu-3.4% eminyakeni emihlanu ezayo, izofinyelela ku-571.6 million USD ngo-2024, isuka ku-482.6 million USD ngo-2019, ngokusho kocwaningo olusha lwe-New Research.
Lo mbiko ugxile kwiFibre Glass Mesh emakethe yomhlaba, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eYurophu nase-Asia-Pacific, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Afrika. Lo mbiko uhlukanisa imakethe ngokuya ngabakhiqizi, izifunda, uhlobo nokusetshenziswa kwayo.
Thola ikhophi eyisampula yombiko wemakethe ye-Fiber Glass Mesh 2020
Bika ngokuqhubekayo ucwaninga ngesimo sokuthuthukiswa kwemakethe kanye nomkhuba wesikhathi esizayo we-Fiber Glass Mesh Market emhlabeni jikelele. Futhi, ihlukanisa ukuhlukaniswa kwemakethe yeFiber Glass Mesh ngohlobo nangezicelo zokucwaninga ngokugcwele nangokujulile futhi iveze iphrofayili yemakethe namathemba.
Ukwahlukaniswa Okukhulu kunjengokulandelayo:
Izicelo ezinkulu zimi kanje:
● Ukuvalwa Kwodonga Kwangaphandle
● Ukwakha ukuvimbela amanzi
Ngokwendawo, lo mbiko uhlukaniswe ngezigodi eziningana ezibalulekile, ngokuthengisa, imali engenayo, isabelo semakethe nokukhula kwe-Fiber Glass Mesh kulezi zifunda, kusuka ngo-2014 kuya ku-2024, kubandakanya
● ENyakatho Melika (e-United States, eCanada naseMexico)
● IYurophu (iJalimane, i-UK, iFrance, i-Italy, iRussia neTurkey njll.)
● I-Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Thailand, Philippines, Malaysia neVietnam)
● INingizimu Melika (iBrazil, i-Argentina, i-Columbia njll.)
● EMiddle East nase-Afrika (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria neNingizimu Afrika)
Lo Mbiko Wocwaningo / Wokuhlaziya Wemakethe ye-Fiber Glass Uqukethe Izimpendulo Zemibuzo yakho elandelayo